Hery Rajaonarimampianina : “Ampy izay ny fampiadiana ny samy Malagasy” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Ampy izay ny fampiadiana ny samy Malagasy”
30/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanamarika ny faha-71 taonan’ny tolom-panafahan’ny Malagasy tia tanindrazana tany Moramanga ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny vadiny, omaly. Andro izay natokana hanamarihana ny hetsika “29 marsa 1947”.
Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara fa fotoan’ny fandinihan-tena izao mba ahafahana miatrika ny ho avy hanarenana ny firenena sy ho fanandratana an’i Madagasikara.
Nohamafisian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa ilaina mandrakariva fahatsiarovantena sy ny firaisankina hanavotana ny firenena. “Tena ilaina ny fahatsiarovantena, ilaina foana ny firaisankina hanavotantsika ity firenena ity. Tsy ho sarotra, araka izany, ny manavotra ny firenena rehefa isika rehetra no mifanome tanana sy miray hina”, hoy ny Filoham-pirenena.
Notsindrian’ny Filohan’ny Repoblika ihany koa fa ampy izay ny fampisarantsarahana ny Malagasy, ary ampy ihany koa ny fampiadiana ny samy malagasy. “Aoka isika hijoro mandrakariva. Mila mifampitarika isika rehetra hikatsaka ny tombontsoa iombonana. Mila firaisankina ny fampandrosoana ny firenena”, hoy izy.
Nomarihiny mantsy fa 58 taona aty aoriana dia mbola tsy tafarina ny firenena. Noho izay indrindra, nampirisika ny rehetra ny Filoham-pirenena amin’ny fikatsahana hatrany ny firaisankina ahafahana mampandroso ny firenena. “Nomena lohahevitra ny fanamarihana ny 29 marsa 1947 tamin’ity ny amin’ny hoe “Firaisankina ho an’ny Fisandratan’i Madagasikara. Noho izay indrindra, efa nametraka ny paikady rehetra hmpandrosoana ny toekarena ny fitondram-panjakana”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Nambarany hatrany fa mbola misy ireo mpiray tsikombakomba hanakorontana ny fiarahamonina eto Madagasikara. Noho izany, nilaza izy fa mbola ilaina ve ny famoretana hanoherana ny fahavalo? Ny rehetra, hoy izy, no mila tonga saina sy mieritreritra amin’ny ho avin’ny firenena.
Nokianin’ny Filoha ihany koa ny fampiasana ny teknôlôjia rehetra, izay hoentina hanalam-baraka sy hanaratsiana ny mpiara-belona, indrindra fa ny fitondram-panjakana. “Mila mijoro hatrany isika hanohitra ny sakantsakana rehetra tsy ahafahana mampandroso ny firenena. Tanjona ny fampandrosoana ara-toekarena eto amin’ny firenena. Fisandratana no andrasan’ny vahoaka . Noho izany, vonona isika malagasy hikatsaka ny tombontsoa iombonana, ary samy manana faniriana ny amin’izany isika rehetra”, hoy izy.
Ankoatra izay, nambarany teny am-pamaranana fa adidin’ny Filoha, hoy izy, ny manoro ny lalana mendrika tokony hitondrana ny firenena sy hiadanan’ny vahoaka.
Hajo Andrianainarivelo : Notsipahan-dRajoelina